Ọrụ - OMG Solutions
Nke a bụ oge na-atọ ụtọ maka ụlọ ọrụ anyị! Anyị bụ ndị na-eto eto Singapore dị elu nke na-eto eto nke na-amalite ma na-ere Ụlọ Ahịa Ọnọdụ Real Time (RTLS) na ahịa ahụike. Anyị na-agbaso akụrụngwa na ndị mmadụ na oge. Usoro anyị na-arụ ọrụ ugbu a karịa ụlọ ọgwụ 100 ụwa. Anyị bụ ndị na-eto eto, ndị na-eto ngwa ngwa na-arụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike, na-atọ ụtọ ma na-ahụ maka ọrụ.
Ugbu a, anyị na-achọ onye na-egbukepụ egbukepụ egbukepụ, ọkachamara, akpali akpali, enyi na enyi ma raara onwe ya nye maka ohere dị n'ihu. OMG Solutions na-akwụghachi ụgwọ ọrụ onwe onye n'ịchụso ihe mgbaru ọsọ anyị niile ma na-akwanyere onye ọ bụla ùgwù nakwa nke okike, ọgụgụ isi na omenala anyị. Ọdịbendị anyị emeela ka anyị na-adọta ma na-ejide ndị nwere nkà dị iche iche nke ọhụụ nke ụzọ anyị ga-esi gbanwee usoro nlekọta ahụ ike.
Nzuzo 28751 44 Echiche Taa